के पहिलो सेक्समा किशोरीलाई पीडा हुन्छ ? - Nepal's Digital Newsportal
एजेन्सी : सबैलाई आफ्नो जीवनको पहिलो सेक्स निक्कै काल्पनिकस्तरमा रमाइलो हुने अपेक्षा हुन्छ । कल्पना गर्नु खराव होइन । केटाहरु पहिलो सेक्स लामो पार्न चाहन्छन् । तर वास्तवमा पहिलो सेक्समा अधिकाँश केटाहरु शीघ्र स्खलनबाट पीडित हुन्छन् । अझ कतिपयलाई त उत्तेजना नहुने समस्या हुन सक्छ ।
उता अधिकाँश युवतीको मनमा पहिलो पटक सेक्स गर्दा पीडा हुने डर हुन्छ । धेरैका लागि यो सत्य पनि हो । तर के स्त्रीलाई पहिलो सेक्समा पीडा हुनु अनिवार्य हो त हो पीडा हुन्छ तर धैर्य गर्नुस् महिलाहरुका लागि पहिलो सेक्स केही पीडादायी हुन सक्छ । तर यो कुनै डराउनु पर्ने स्तरको पीडा होइन ।
गर्भ रहने खतरा :
अधिकाँश जोडीले पहिलो यौन संगै नचाहेको गर्भ रहेर झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ । त्यसकारण बाहिर विर्यपात गर्ने वा सेफ पिरियड जस्ता कुरामा भर गर्नु हुँदैन । अविवाहित जोडीले सके सम्म कण्डोम वा त्यस्तै भरपर्दो परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु पर्छ । तरल पदार्थको आदान प्रदान शारीरिक सम्बन्धका क्रममा महिला र पुरुषबीच विभिन्न यौनिक रसको आदान प्रदन हुन्छ । सामान्य रसको आदान प्रदानले नै गर्भ रहने उच्च खतरा हुन्छ । तपाइँले चाल नै नपाइ पनि कतिपय रसायनको आदान प्रदन हुने कुराप्रति ध्यान दिनुस् ।
गायनसङ्गीतमा उज्यालो भविष्य छ : तमोट
अचम्मकाे पहाड, जहाँ ढुंगा फालेर थाहा पाइन्छ गर्भमा छाेरा छ कि छाेरी ?
यौन सम्पर्क राख्दा हुन्छ यस्ता फाइदा
इटहरीका मेयरलाइ नगरवासीकाे प्रश्न टेंग्रा पुल कहिले बन्छ ?